eHimalaya Online || News from nepal » आजको राशिफल यी निम्न राशिलाई व्यापारमा सफलता प्राप्त हुने ,तपाइको कस्तो रहला दिन?
आजको राशिफल यी निम्न राशिलाई व्यापारमा सफलता प्राप्त हुने ,तपाइको कस्तो रहला दिन?
२०७८ भदौ २ गते बुधबार ०१:१९
मेष:- अरु बाट अपेक्षा नगर्नुहोस्। चिन्ता र तनाव रहनेछ। थकान हुनेछ। जोखिम नलिनुहोस्। विवाद बाट बच्नुहोस्। त्यहाँ राजनीतिक सहयोग र यस क्षेत्र को जनता संग सम्बन्ध बृद्धि हुनेछ। बिद्यार्थीहरु प्रतियोगिता मा सफलता प्राप्त हुनेछन्।...
मेष:- अरु बाट अपेक्षा नगर्नुहोस्। चिन्ता र तनाव रहनेछ। थकान हुनेछ। जोखिम नलिनुहोस्। विवाद बाट बच्नुहोस्। त्यहाँ राजनीतिक सहयोग र यस क्षेत्र को जनता संग सम्बन्ध बृद्धि हुनेछ। बिद्यार्थीहरु प्रतियोगिता मा सफलता प्राप्त हुनेछन्। ब्यापार राम्रो हुनेछ। आफ्नो बोलीमा संयम राख्नुहोला ।
वृष:- कुनै एक कार्यक्रममा भाग लिने अवसर हुनेछ। रचनात्मक कार्य सफल हुनेछ। ब्यापार राम्रो हुनेछ। काममा धैर्यता अपनाउँदा सफलता मिल्नेछ। योजनाहरु सफल हुनेछन्। साथीहरु बीच तपाइँको प्रभुत्व बढ्नेछ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला।
मिथुन:- सम्पत्तीको कार्यले लाभ दिनेछ। तपाइँ परीक्षा र साक्षात्कार आदि मा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। सुख हुनेछ। पैसा हुनेछ। समाजमा प्रतिष्ठाको कारण सम्मान बढ्नेछ। तपाइँ आजीविका मा नयाँ प्रस्तावहरु पाउनुहुनेछ। पारिवारिक समस्यालाई बेवास्ता नगर्नुहोस्।
कर्कट:- प्रेम सम्बन्धमा अनुकूलता रहनेछ। राजनैतिक काम बन्नेछ। ब्यापार राम्रो हुनेछ। चिन्ता हुनेछ। जोखिम नलिनुहोस् सन्तानबाट मद्दत मिल्नेछ । आर्थिक स्थिति मा प्रगति को संभावना छ। आकस्मिक धन आर्जन हुने सम्भावना छ। क्रोध र उत्तेजना नियन्त्रण गर्नुहोस्।
सिंह:- समय ठीक छैन। सवारी साधन, मेसिनरी र आगो को उपयोग गर्दा सावधानी अपनाउनुहोस्। लेनदेनमा सावधान रहनुहोला। विवाद नगर्नुहोस्। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ। सकारात्मक सोचका कारण प्रगति हुनेछ। पद्धतिमा विश्वसनीयता कायम राख्नुहोस्।
कन्या:- धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ। राजनैतिक अवरोध हट्नेछ। वरिष्ठले सहयोग गर्नेछन्। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस् । बुद्धि र तर्क संग, काम मा सफलता को संभावना हुनेछ। यात्रा कष्टदायी हुन सक्छ। त्यसैले छोड्नुहोस्। ब्यापार लाभदायक रहनेछ।
तुला:- नयाँ सम्झौता हुनेछ। यात्रा, लगानी र रोजगारी अनुकूल रहनेछ। समस्यामा नपर्नुहोस्। शत्रु सक्रिय रहनेछन्। वास्तविकता र व्यावहारिकता काम को प्रकृति मा आवश्यक छ। ब्यापार ब्यवसायमा नयाँ योजनाहरुमा कुनै काम हुनेछैन। आफ्नो जीवनसाथीको ख्याल राख्नुहोस्।
वृश्चिक:- बकाया वसूल गर्ने प्रयास सफल हुनेछ। ब्यापारिक यात्रा सफल रहनेछ। आम्दानी बढ्नेछ। घर बाहिर खुसी रहनेछ। तपाइँ आफ्नो लतहरु लाई नियन्त्रण मा राखी काम गर्नु पर्छ। व्यवसाय मा कर्मचारीहरु मा धेरै भरोसा नगर्नुहोस्। आर्थिक स्थिति मध्यम रहनेछ।
धनु:- सवारी साधन र मेसिनरी को उपयोग मा सावधान रहनुहोस्। चीजहरु हातमा राख्नुहोस्। स्वास्थ्यमा खर्च हुनेछ। विवाद नगर्नुहोस्। यात्रा गर्दा आफ्नो सामान सम्हालेर राख्नुहोस्। काम प्रति पूर्ण समर्पण र उत्साह राख्नुहोस । मातहतमा ध्यान दिनुहोस्। आर्थिक स्थिति राम्रो रहनेछ।
मकर:- पदोन्नतिको प्रयास सफल हुनेछ। उपहार तथा भेट प्राप्त हुनेछन्। यात्रा, लगानी र रोजगारी अनुकूल रहनेछ। जोखिम नलिनुहोस्। ब्यापारिक चिन्ता हट्नेछ। पदोन्नति को लागी अवसर मात्र तपाइँको आफ्नै शक्ति संग आउनेछ। योजनाहरु सफल हुनेछन्।
कुम्भ:- तपाइँ बिर्सिएका साथीहरु लाई भेट्नुहुनेछ। तपाइँ उत्साहजनक जानकारी पाउनुहुनेछ। मूल्य बढ्नेछ। ब्यापार राम्रो हुनेछ। तपाइँको बुद्धि संग, तपाइँ सही निर्णय लिन को लागी सक्षम हुनुहुनेछ। विकास योजना बनाइनेछ। त्यहाँ निजीहरु बीच असन्तुष्टि हुन सक्छ। ब्यापार ब्यबसायमा मनग्य आम्दानी हुनेछ।
मीन:- मेहनतको फल मिल्नेछ। घर बाहिर सोधपुछ हुनेछ। थकान हुनेछ। पैसा प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ। सुख हुनेछ। त्यहाँ जग्गा, घर को समस्या हुन सक्छ। तपाइँ आजीविका मा एक नयाँ प्रस्ताव पाउनुहुनेछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ। सन्तान संग समस्या हुन सक्छ ।
प्रकाशित मिति २०७८ भदौ २ गते बुधबार ०१:१९